Otu esi ahọrọ ala nke mgbatị ahụ-News-Topflor China Limited
Otu esi ahọrọ ala nke mgbatị ahụ
Echiche:4 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-07-21 Mmalite: Saịtị
gyms ndị ọkachamara kwesịrị ọ bụghị naanị igosi ọkachamara na nkwado akụrụngwa, ndị otu nkuzi, ntụzịaka ahụike, wdg, kamakwa ihe ịchọ mma n'ozuzu ya, ọkachasị ihe ịchọ mma nke usoro ala egwuregwu, bụ ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mma iji meziwanye ụdị, ọkachamara, mmetụta egwuregwu. na ahụmahụ ndị ahịa.
Yabụ, kedu ihe njirimara nke ala mgbatị ahụ dị mma? Anyị na -agụta nhọrọ ala dị iche iche dabere na mpaghara mpaghara ọ bụla mgbatị ahụ.
Mpaghara Ọrụ Agụmakwụkwọ nkeonwe
N'oge a, a na -eji ọtụtụ ebe egwuregwu arụ ọrụ maka ọzụzụ onwe onye.
Mpaghara ọzụzụ ọrụ ọzụzụ onwe onye, ​​​​dị ka oghere pụrụ iche maka ndị VIP dị elu, ala ọ bụghị naanị na-achọ nchekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa ahụike, mmetụta ụkwụ na-agbanwe mara mma, arụmọrụ ịma jijiji na egwuregwu, kamakwa n'ụzọ ọkachamara haziri ụdị iche iche ezubere iche n'elu ala. Akụkọ gbasara ọzụzụ ọzụzụ na-arụ ọrụ na nha, maka onye nkuzi onwe onye nkuzi na nkuzi otu.
Nyere aka n'ọzụzụ mmegharị ahụ ọtụtụ ụbọchị, nke zuru oke, ọtụtụ akụkụ, na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, ma melite ahụ ike na mgbanwe anụ ahụ, nhazi na ihe ọchị nke ndị na-eme egwuregwu, ma gboo mkpa ọtụtụ mmadụ n'ezie.
Mpaghara ọrụ ọzụzụ nkeonwe nwere ike iji plastik ahaziri nke ọma, nke nwere ike ime ka ala nwee ọrụ mpaghara mpaghara. Site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke maapụ ihe ọmụma ọzụzụ ziri ezi, ndị ọrụ nwere ike ịzụlitekwu imepụta ihe na ihe ọchị na oge ọzụzụ ọ bụla.
Ime ụlọ yoga
Na mpaghara pụrụ iche dị ka yoga, ahụ mmadụ kwesịrị ịdị na-akpakọrịta na ala ruo ogologo oge, na ịdị nro, nkasi obi na ụda ụda nke ala dị elu.
N'ihi na ndị ọrụ kwesịrị ịmegharị ụkwụ efu n'ala, ha nwere ike ịhọrọ ala PVC siri ike, nke nwere ike ime ka ụkwụ dum dịkwuo nro ma dịkwuo mma, ma nwee ike ibelata nrụgide dị n'azụ, ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ mmadụ nke ogologo oge na-akpata. .
N'otu oge ahụ, ọ nwekwara mmetụta dị ịrịba ama mbelata mkpọtụ, nke nwere ike ibelata nnyonye anya nke mkpọtụ mpụga ma nye ebe ọzụzụ mara mma na lekwasịrị anya maka ndị egwuregwu yoga.
Plasticlọ plastik PVC, nhọrọ kachasị mma maka ala ụlọ ọgwụ
Ogwe plastik PVC ka mma maka ogige ntụrụndụ ụmụaka